Voatery nandoa vola i Elton John noho ny fanorisorenana ara-nofo
Elton John, 69 taona, dia tsy afaka nanome ny fitsarana tamin'ny porofo mahery momba ny tsy fananany tsiny amin'ny resaka fanorisorenana ara-nofo an'i Jeffrey Wenniger, izay niasa tamina mpiambina tamin'ilay mpihira. Tsy maintsy nanefa ilay fitarainany vola iray isa enina ho an'ny fahasimbana ara-moraly izy.
Tamin'ny volana Martsa, niampanga azy ny mpiaro ny fonja an'i Elton John, niampanga ny lehiben'ny mpanao raharaha teo aloha. Nolazainy fa ilay mpanakanto dia naka azy mandrakariva tamin'ny fiterahana, nanandrana nametraka ny tanany teo amin'ny kirany, nanosika azy ary nanenjika azy. Ny Sir Elton, mazava ho azy, dia tsy nanaiky ny fahatsapany ho meloka ary niantso ny teny hoe "mpandainga tsy misy fotony" i Wanniger.
Fialan-tsasatra amin'i Elton John miaraka amin'ny fanohanan'ny trano maoderina Gucci
Afeno ny heloka
Araka ny A Sun tamin'ny Alahady, ny mpihira fanta-daza dia tsy naniry ny dokam-barotra ary namaha ny olan'ny niharam-boina, izay notifirina tamin'ny taona 2015, tamim-pahamendrehana, nanome azy tamim-bola mendrika ary nampiasa ny fifandraisany rehetra mba hisorohana ny fampahalalam-baovao tsy hivoatra.
Angry Elton dia naniry ny hamerina amin'ny laoniny ny anarany marina, saingy ny Fitsarana Ambony no nanamafy ny fanapaha-kevitra teo aloha, araka ny filazan'ny mpanao gazety ny zo hanonta ny fitaovana manala baraka.
Ampianay hatrany ny solontenan'ilay mpihira fa mbola mandà ny filàzan'ny mpiambina, saingy tsy afaka manazava ny antony namindran'ny mpanjifany vola goavana ho an'ny kaontin'i Jeffrey Wenniger.
Ny Britney Spears dia mihaona amin'ny modely tanora
Kim Kardashian sy Emily Ratjakovski dia nanao ny tenany selfie naked
Tom Hiddleston sy Elizabeth Olsen
Prince Harry dia nanapa-kevitra ny hitady ny vadiny amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra
Fampielezan-kevitry ny dokambarotra miaraka amin'ny Britney Spears ho an'i Kenzo dia nanakiana noho ny fanarenana tafahoatra
Irina Sheik dia nalaina sary noho ny tetikasa "miafina" avy amin'ny Love Magazine
Naverin'i Hilary Duff indray ny raharahany tamin'i Matthew Coma
Nahoana no nofinofy ny fahafatesan'ny lehilahy iray velona?
Ny endri-pitenin'ireo vehivavy miara-dia amin'ny "11 namana" any Ocean: mitana an'i Cate Blanchett
Fiainana vaovao Katy Perry: mividy trano iray ary manasonia fifanarahana amin'ny studio
"Bouquet anniversaire" tanana amin'ny tanana ataonao
18 "sary ambiny" momba ny fihetseham-po ho an'ny fotoana rehetra
Anemia - Antony
30 alika, izay tokony ho tonga bandy Pakistane!
Toe-kafe mihaja - fametrahana taranaka vaovao
Famantarana kankana amin'ny ankizy
Fortune-miteny amin'ny teny nindramina
Bounty ao an-trano
Ahoana ny famerenana ny volo rehefa manasa?